जापान रोजगारीको लागि कहिले हुँदैछ भाषा परीक्षा ? - Deshko News Deshko News जापान रोजगारीको लागि कहिले हुँदैछ भाषा परीक्षा ? - Deshko News
जापान रोजगारीको लागि कहिले हुँदैछ भाषा परीक्षा ?
जापान रोजगारीका लागि भाषा परीक्षा आउँदो असोजमा सञ्चालन हुने बताइएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका रोजगारी खुलाएका १४ क्षेत्रमध्ये पहिलो चरणमा केयरगिभर कामदार लैजाने जापानको तयारी छ । भाषा परीक्षापछि सीप परीक्षण गरिन्छ । भाषा परीक्षाका लागि जापान फाउन्डेसनले परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ ।